မြန်မာပြည်ရှိရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်များ | iMyanmarHouse.com
လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန်ရှိပါသည် ပင်လုံလမ်းကျော်ကပ် (၃၄)ရပ်ကွက်
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် (40 X 60) 3.5RC မာစတာ အိပ်ခန်း (၆)ခန်း၊ ရိုးရို...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7994781 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
3Storey Thanlwin Road( သံလှငျလမျး ) ကမာရှတျ
3Storey House Kamaryut Township. Land Size (50ft×80ft) . - 4Master Bed Room. - ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8099711 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပြင်ဦးလွင်မြို့ (၉၉၅) စတုရန်းပေ ၊ The 9th Avenue Residence (ဂရန်အမည်ပေါက်) လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည်။
- The 9th Avenue Residence သည် ပြင်ဥ...
(60'x90')အကယျြ၊ လှိုငျ၊ ပွညျလမျးသှယျ၊ နရောကောငျး 2RC အရောငျး
တညျနရော - 5½မိုငျ၊ ပွညျလမျးသှယျ၊ လှိုငျမွို့န...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8084988 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပြည်လမ်းမဘေးတွင်ပေ (၇၀×၁၄၀) ကျယ်သည့် ဂရမ်မြေအိမ်နှင့်ခြံလျော့ဈေးဖြင့်ရောင်းမည်။
ပြည်လမ်း ထောက်ကြန့်မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် ပေ၇၀ ၁၄၀ကျယ်သည...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8107123 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8056738 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဆုံအနီး(Hotel,Show room,Office ဖွင့်ရန်သင့်တော်သော)လုံးချင်း(၅ထပ်ခွဲ)တိုက်ရောင်းရန်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8120693 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8120692 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8120691 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8120638 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဧရာစိုး (အိမ် ၊ ခြံ ၊ မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း) ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8120470 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8120441 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
3,990 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8120412 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
2RC ၊ (20 × 60) ပေ၊ ဝဇေယန်တာလမျး ၀ငျဝငျခငျြး၊ တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8120365 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စွှေတောင်ကြား လုံးချင်းတိုက်သစ် ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8120339 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်